FOMBA 5 HANAFENANA NY TOERANA MISY ANAO AMIN'NY INTERNET (MIJANÒNA TSY FANTATRA ANARANA)! - MALEFAKA
Fomba 5 hanafenana ny toerana misy anao amin'ny Internet (Mijanòna tsy fantatra anarana)!
Raha tsy tamin'ny taona 2021 dia efa nanomboka tamin'ny maha zava-dehibe ny fanafenana ny toerana misy anao izahay. Soa ihany fa ny ankamaroan'ny mpampiasa aterineto izao dia mahatakatra tanteraka ny antony mahatonga ny ampahany sy ny mpampiasa maro afeno ny adiresy IP miaraka amin'ny VPN mba hitazonana ny toerana misy azy ireo.
Na izany aza, mbola hanazava ny antony maha-zava-dehibe anao ny manafina ny toerana misy anao amin'ny Internet. Hanampy ireo vitsivitsy izay mbola tsy mahatakatra tsara ny maha zava-dehibe ny fanafenana ny toerana misy azy amin'ny Internet izany. Noho izany, andeha hojerentsika ny fanazavana fohy momba ny antony tokony hanafenanao ny toerana misy anao amin'ny Internet.
Nahoana ianao no tokony hanafina ny toerana misy anao amin'ny Internet?
Betsaka ny tombony azo amin'ny fanafenana ny toerana misy anao na ny tena IP amin'ny Internet. Ny voalohany indrindra dia ny fiainanao manokana, izay mora atahorana amin'ny olona afaka mahita ny IP anao. Izany dia mitarika ho amin'izany olona izany dia hanara-maso ny toerana misy anao. Ankoatr'izay, ny fameperana ara-jeografika rehetra dia ampiharina ihany koa mifototra amin'ny adiresy IP avy amin'ny faritra samihafa.
Ny elo amin'ny fameperana ara-jeografika dia mazàna mandrakotra ny serivisy streaming lehibe rehetra, lalao, streaming ara-panatanjahantena ary hetsika mahaliana maro hafa. Ny hany fomba handresena ireo fameperana ara-jeografika ireo dia ny fanafenana ny toerana misy anao amin'ny Internet.
Misy fomba maro azon'ny mpampiasa atao mba hanafenana ny tena IP sy ny toerana misy azy. Hiresaka momba ny fomba dimy tsara indrindra hanafenana ny toerana misy anao amin'ny Internet isika. Hanampy anao ho mitokana tanteraka amin'ny tranonkala izany raha mankafy ny fahalalahana amin'ny Internet tanteraka.
Fomba 5 hanafenana ny toerana misy anao amin'ny Internet
Ireto fomba dimy manaraka ireto dia nomena isa avy amin'ny mahomby indrindra ka hatramin'ny kely indrindra. Na izany aza, ireo fomba rehetra ireo dia hanampy anao hanafina ny toerana misy anao amin'ny Internet. Noho izany, raha tsy misy fisalasalana, andao hiroso amin'ny fomba voalohany:
Ny fomba mahomby indrindra sy atolotra hanafenana ny toerana misy anao dia ny fampiasana serivisy VPN malaza. Araka ny voalaza etsy ambony dia iray amin'ireo fitaovana malaza indrindra sy ampiasaina hanafenana ny adiresy IP an'ny mpampiasa. Ny VPN dia manarona ny adiresy IP anao ary manome anao adiresy IP vaovao. Ity IP vaovao ity dia avy amin'ny toerana nofidian'ny mpampiasa ary ny mpizara VPN ao amin'io faritra io dia manome ny IP ho an'ny mpampiasa.
Fanampin'izany, ny VPN dia mamorona tonelina voaaro azo antoka eo amin'ny mpampiasa sy ny mpizara, izay manampy ny mpampiasa ho azo antoka tanteraka sy tsy miankina. Ny angon-drakitra amin'ny Internet an'ny mpampiasa dia voarakotry ny serivisy VPN, izay manampy amin'ny fiarovana ny angon-drakitra sy ny hetsika ataon'ny mpampiasa.
Afaka manafina mora foana ny toerana misy anao ianao ary manova izany amin'ny toerana tianao amin'ny fampiasana serivisy VPN. Na izany aza, mila misafidy serivisy VPN malaza ianao, izay afaka manafina tanteraka ny toerana misy anao ary manome anao fiainana manokana rehefa mankafy ny fahafahanao amin'ny Internet ianao, tsy misy famerana mifototra amin'ny toerana misy anao.
Ny fitaovana faharoa fampiasa matetika sy malaza dia proxy web. Ny mpizara proxy dia tetezana manelanelana ny fifamoivoizana amin'ny Internet ary mitaratra ny fihetsiky ny mpampiasa. Izy io dia miasa toy ny mpanelanelana izay mitondra ny packet data anao mankany amin'ny tranokala tianao haleha rehefa natomboky ny mpizara proxy.
Tena mandaitra izany, na izany aza, miadana kokoa noho ny VPN ary azo antoka fa tsy manome izany haavon'ny fiarovana sy ny fiainana manokana izany. Na dia miasa tsara amin'ny fanafenana ny toerana misy anao aza izy io, dia tsy azonao antenaina fa ho azo antoka tanteraka. Na izany aza, na proxy aza dia afaka manampy anao hanova ny IP anao.
TOR na The Onion Router dia tetikasa malaza be. Ny TOR dia nohajaina fatratra noho ny fiarovana azy sy ny tsy fitononana anarana izay omeny ny mpampiasa azy. Fanampin'izany, dia fitaovana maimaim-poana izay tena azo itokisana sy mendrika itokisana. Na izany aza, ny TOR dia manome hafainganam-pandeha mihitsy. Ny fiasan'ny TOR dia hafa kely, fa ny tanjona dia ny hanome adiresy IP vaovao ho an'ny mpampiasa sy hanafina ny voalohany.
Raha mampiasa TOR, dia alefa amin'ny alàlan'ny nodes isan-karazany ny angon-drakitra an-tserasera an'ny mpampiasa. Mandefa ny fangatahan'ny mpampiasa ny TOR amin'ny toerana haleha rehetra ary amin'ny alàlan'ny fandefasana azy amin'ny alàlan'ny fampitaovana na node maro. Amin'izany fomba izany ny tena adiresy IP sy ny toerana misy ny mpampiasa dia tsy fantatra anarana. Tena azo itokisana sy mahomby izy io, na izany aza, noho ny fitsambikinana tsy tapaka, ny hafainganam-pandehan'ny tambajotra TOR dia tena miadana.
Fampiasana tambajotra finday
Fomba iray hafa hanafenana ny IP anao amin'ny tontolo an-tserasera dia ny fampiasana ny tambajotra finday. Azo antoka fa hanova ny IP-nao izany ary mandaitra izany raha toa ka voahitsakitsaka na voatafika ny IP-nao voalohany. Na dia tsy manome anao fahalalahana amin'ny Internet aza izany, dia azo antoka fa fomba iray hanafenana ny adiresy IP anao izany. Tena ilaina tokoa izany raha ao anatin'ny toe-javatra maika ianao.
Fampiasana Hotspot Wi-Fi Public
Ny fomba tsara sy malalaka iray hafa hanafenana ny adiresy IP-nao dia ny fampiasana hotspot Wi-Fi ho an'ny daholobe. Azo antoka fa hanova ny adiresy IP-nao izany. Mitovitovy amin'ny fampiasana ny tambajotra findainao izany ary tena mandaitra amin'ny fahazoana adiresy UP vaovao ho anao, izay mety hampiasain'ny olona maro loatra. Na izany aza, maro ny loza mety hitranga amin'ny fampiasana toerana mafana Wi-Fi ho an'ny daholobe, noho izany dia tsy manoro hevitra na iza na iza izahay hampiasa Wi-Fi ho an'ny daholobe raha tsy mampifandray VPN aloha ho an'ny fiarovana sy ny fiainana manokana.
Noho izany, ireto no fomba dimy ahafahanao manova ny toerana misy anao amin'ny fanafenana sy fanovana ny adiresy IP anao. Manantena izahay fa hanampy ny maro izay mbola sahirana amin'ny fitadiavana fomba tsara hanafenana ny toerana misy azy ao amin'ny tranonkala izany.
Atsaharo vetivety na sakanana ny fanavaozana Windows na mpamily Windows 10!
Ahoana ny fomba hanehoana ireo rakitra sy lahatahiry miafina ao amin'ny Windows 10 version
VPN manakana ny Internet amin'ny windows 10? Ireto misy vahaolana 7 azo ampiharina
3 Fomba samy hafa ahafahan'ny kaonty mpitantana Windows 10, 8.1 ary 7